China C-mwekota Mmezi Vulcanizing Press maka Rubt echebe Abụkwa idozi ụlọ ọrụ na-emepụta | Antai
Akụkụ （L * W * H mm）
The belt vulcanizer bụ pụrụ ịdabere, fechaa na obere igwe, nke na ọtụtụ-eji na ubi nke nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, ike osisi, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ihe, ciment, unyi, chemical ụlọ ọrụ, wdg
Bugharịa igwe na ebe ndozi.
Dejupụta gluu na mpaghara ndị mebiri emebi dị mkpa ka a rụzie.
Debe etiti ahụ n'okpuru eriri ahụ ma dozie ya na mpaghara ahụ mebiri emebi.
Debe efere kpo oku dị n'okpuru ebe eriri ahụ mebiri emebi wee tinye etiti ahụ dị n'elu.
Pịa efere hydraulic ahụ ruo mgbe ọ ruru ogo nrụgide zuru oke.
Jikọọ eriri mbụ na isi iyi na igbe nchịkwa eletriki. Ma jikọọ eriri nke abụọ na igbe njikwa na efere elu na ala.
Biko rịba ama na ọ kwesịrị dakọtara akara ndị kwekọrọ na igbe njikwa.
Tụgharịa igbe njikwa wee malite usoro mmezi vulcanizing.
Nke gara aga: PU ịkwanyere echebe Vulcanizing Press maka Thermoplastic echebe Splice
Osote: Rail-n'ịnyịnya Abù Repair Vulcanizing Press maka ebu echebe
Cc Belt Vulcanization Pịa
Otutu Belt Vulcanization Press
Naịlọn Belt Vulcanization Press
Vc Belt Vulcanization Pịa